INGIRIIS DANIFF DOG INFORMATION IYO SAWIRRO - EEYAHA
Ingiriis Daniff Dog Information iyo Sawirro
Dane Weyn / Ingriis Mastiff Isku-dhafan Noocyo Caan ah
Apollo Ingriiska Daniff ee 2 sano jir ah— 'Apollo waa Daniff kan ugu badan eey edeb leh Weligay waan qabtay. Wuxuu ku jiray qoyskeena tan iyo markii uu jiray 10-toddobaad. Wuxuu jecel yahay carruurta wuxuuna leeyahay dareen dabiici ah oo ilaalinaya ilmo kasta xitaa kuwa uu hadda la kulmay. Wuxuu si wanaagsan ulala dhaqmaa eeyaha kale wuxuuna xitaa ka caawiyay tababarka eyda samatabbixinta oo leh arrimo dabeecad leh maadaama uusan waligiis aheyn mid dagaal badan oo u muuqda inuu ka fogaado eey kasta oo kale. Wuxuu ahaa 145 lbs wuxuuna taagnaa 34 inji garabka isagoo jira 2 wuxuuna miisaamay 195 rodol markuu jiray 4 jir. in la shaqeeyo. Dhammaan eeyadeenna waxaa loo tixgeliyaa oo loola dhaqmaa sidii xubno ka tirsan qoyskeenna in badanna waqtigeenna ayaa lala qaataa iyaga. Waxaan daawaday Cesar Millan oo had iyo jeer si dabiici ah ayaan ugu waafaqsanahay falsafaddiisa. Waxaan sidoo kale akhriyay The Monks of New Skete Sida loo noqdo Eeyahaaga Saaxiibka Ugu Wanaagsan waxaanan ku hirgaliyay falsafadahan kor u qaadista eeyadayda oo dhan.
Daanifku maahan eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Daanyeer Weyn iyo Ingiriisi Mastiff . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aamiyo dabeecadda noocyada isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta isla markaana aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% saafi ah ilaa 50% daahir ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaabno jiil badan .
DKC = Naadiga Daanyeelka Daniff
Naadiga Isku-dhafka Canine ee Mareykanka = Danif
DBR = Diiwaanka Taranka Naqshadeeye = Danif Weyn ama Danif
Naadiga Naqshadeeyaha Eeyaha Kaynka Naadiga = Danif Weyn
Diiwaan Geliyaha Cunnada Caalamiga ah®= Danif
Apollo the Daniff (Dane Weyn / Mastiff isku dhafan) da'da 2 sano
Finnegan waa hal sano jir ½ Ingiriisi Mastiff iyo ½ Daanyeer Weyn qas ey ey (Ingiriis Daniff)
Finnegan waa hal sano jir Ingiriisi Mastiff iyo ½ Daanyeer Weyn qas ey ey (Daniff)
'Waxaan haystaa Ey yaryar oo 4 bilood jir ah, Harley iyo Scooby. Labaduba miisaankoodu waa 60 rodol. Waxaan lahaa noocyo badan noloshayda laakiin labadan Daniffs waa eeyo cajaa'ib leh dabeecado waaweyn. Aad ayey taxaddar iyo jacayl ugu jiraan carruurtayda 3 iyo 2 sano. Marnaba ma bixi doono oo waxaan heli doonaa eey kale inuu ka mid yahay raggaas mooyee. Iyagu waa wax walba oo aad ku weydiisan karto eey. '
'Waxaan uboqday wiilkeyga Ingriis / reer Mastiff Mastiff ah. Sawirka ku lifaaqan ee aan soo qaaday waa qaar ka mid ah buugaagta toddobada toddobaad. Dhammaantood waa dad saaxiibtinimo leh oo jecel inay ciyaaraan (waxa eeydu aysan sameynin?). Waxay leeyihiin shakhsiyad deenish ah iyo dabeecad ahaanba. '
Liiska eeyaha Dheecaan ee Dane Weyn
Eeyo waaweyn oo dheeri ah
minipper Pincher chihuahua qas bunni
sawirrada isku darka jiirka chihuahua
ingiriiska springer spaniel oo leh dabada
basset hound Jarmalka shepard isku darka
sern bernard iyo bernese eey isku darka